सम्पादकीय Archives - Page2of7- Prabhav Khabar
जुत्ता प्रहार ‘दुःखपूर्ण’
लोकतन्त्रमा नेताको विकल्प देखिँदैन । लोकतन्त्रमा मुलुकको सञ्चालन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो । आवधिक निर्वाचन हुने र सो निर्वाचनमा जो जस्ले बहुमत प्राप्त गर्छ वा जुन दललाई जनताले बहुमत दिन्छन्, त्यहि पार्टीले सरकार गठन गर्ने र मुलुकको कार्यकारी अधिकार पाउँछ र मुलुक सञ्चालन गर्छ । यो भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्तम प्रक्रिया भएकाले नै आज विश्वभर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिन्छ । यसबाट के दे...
साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसी नेपालका लागि घातकसिद्ध हुने देखिएको छ । सित्तैमा दियो भन्दै सबै किसिमका सहयोग स्वीकार गर्नु नेपालका लागि हितकर देखिँदैन । तर, नेताहरूले किन एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् ? यसलाई भने अब अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ । कुनै पनि पक्षले दिने सहयोगमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुक्छ नै । त्यसमाथि अमेरिकाले अनुदान (सित्तै ) मा दिने भनिएको सो परियोजनाबाट नेपाललाई फाइदा नपुग...
नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक
अहिले संसदमा अत्यन्तै गहन र महत्वपूर्ण विषय उठेको छ, त्यो हो नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन । हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका नेताहरू आज काठमाडौंजस्तो अत्यन्तै महँगो स्थानमा महल ठडाएका छन् । उनीहरूको हैसियत अझै गाउँघरमा दयनीय अवस्था छ । तर, आज उनीहरू काठमाडौंमा तले घर, गाडी, उत्तिकै ठाँटिलो बनेर बसेका छन् । घरमा जुत्ता लगाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने मात्र नभएर मासु खान दसैँ नै पर्खनु पर्नेहरू आज सपनामा झैँ ...
श्रम गन्तव्य खोजी आवश्यक
मुलुकमा रोजगारको सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । बरु सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै थुनेर राख्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । साँच्चै सरकारले युवाहरूलाई विदेश पठाउनै चाहँदैन तर सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन पनि सक्दैन । कस्तो गज्जबको कुरा । आफू दिन नसक्ने र उसले गरी खाँदै आएकोप्रति सरकारले आरिस गरिरहेको देखिन्छ । स्वदेशम...
सरकार यत्ति तल झरेको छ कि उसलाई विधिको शासनलाई कुल्चेर अघि बढेको देखिन्छ । हिजो राजा कानुनभन्दा माथि थिए । यसैको निहुँमा नेताहरूले राजाको उखरमाउलो काढेका थिए । किनभने मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गरेर कानुनभन्दा कोही माथि नहुने गरी नेताहरूले लोकतन्त्र ल्याउने भन्दै जनताको साथ मागेका थिए । नेताहरूको शब्दजालमा आमजनता परेपछि यसै भरमा मुलुकमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तर, यहि लोकतन्त्रमा...
एमसिसीबारे स्पष्ट होऊ
सत्तारुढ दललाई एमसिसीले गाँजेको छ । यसैबेला मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै विवादमा आएका छन् । एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बेलामा मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अहिले सत्तारुढ दलमाथि नैतिकताको संकटको बादलले घेरेको देखिन्छ । अडियो प्रकरणले सत्तारुढ दललाई निक्कै जोडले धक्का दिएको छ । अहिले नै चुनाव हुने हो भने सत्तारुढ दल भदौको भेलले बगाएझैँ बगाउने देखिन्छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा मन्त्रीहरूल...
सामाजिक संस्थालाई अनुगमन आवश्यक
मुलुकमा अहिले इतिहासकै बलियो सरकार भएको अवस्था हो । यो सरकार ढल्नका लागि सत्तारुढ दलभित्रै षड्यन्त्र भयो भने मात्र सम्भव छ । अन्यथा सरकार ढल्ने सम्भावना नै छैन । तर, यसैबीच प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको भनेर उड्डयन्ते कुरा गरेर जगत्लाई हँसाएका छन् । जबकि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पनि स्वयं प्रधानमन्त्री नै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्न खोजेको भनेर जनताको ध्यान मोड्ने योजनामा सरक...
राजीनामा दिएपछि सात खुन माफी ?
समृद्धिको नारा अघि सारेपछि यहि नाराका कारण जनताले मत दिए । तर, नेताहरू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले समृद्धिको नारा व्यक्तिगत तहमा मात्र सिमित गराएका छन् । लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात नेताहरू र नेताका आसेपासेहरूको मात्र समृद्धि भएको छ । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्था यसरी बढाएका छन् कि मानौँ भदौरे भेलझैँ । सरकारमा गएर अनियमितता चम्काउने र सात पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति कमाउने काम नेताहरूले गर्...
कहिलेसम्म भागबन्डाको राजनीति ?
नेपाली राजनीतिक दलहरूका कारण लोकतन्त्रको परिभाषा अब अरु खोतल्नु परेको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै विधिको शासनका रूपमा लिइन्छ तर नेपालमा भने राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई आफू र आफ्नो आसेपासेलाई मात्र पदमा पुर्याउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । आफू र आफ्नो आसेपासेलाई मात्र पदमा पुर्याउने हो भने मुलुकमा गणतन्त्रको आवश्यकता थिएन । हिजो राजाले आफूखुसी शासन सत्ता सञ्चालन गर्याे र मुुलुकको ढुकुटी...
स्थानीय तहलाई काबुमा राख
स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको दुरूपयोग गर्ने काम मात्र भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट आफूले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन । उनीहरूले आफू जनप्रतिनिधि भएको फाइदा लिँदै सडक निर्माणको नाममा डोजर मालिक बनेका छन् । जनताको जनप्रतिनिधि बन्नुभन्दा पनि ठालू प्रवृत्ति देखाएर स्थानीयमाथि हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ । विकासभन्दा पनि स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई आफूअनुकूल खर्च गर्ने काम मात्र गर्दै ...